Kooxo Hubaysan oo Rasaas ku furay Meherad ay fadhiyeen dad shacab ah Deegaanka Buubi ee gobolka Mudug | Puntland Vision
Kooxo Hubaysan oo Rasaas ku furay Meherad ay fadhiyeen dad shacab ah Deegaanka Buubi ee gobolka Mudug
October 11, 2017 By News Desk Leave a Comment
11 Ogtober (Puntland vision):–Kooxo hubaysan ayaa xalay weerar ku qaaday Deegaanka Buubi ee gobolka Mudug kuwaas oo rasaas ku furay dad shacab ah oo xiligaasi fadhiyey goob meherad ah.
Rasaasta ay rideen kooxahaasi ma jirto khasaare ka dhashay sida ay sheegayaan dadka degaanka Buubi ee gobolka Mudug iyagoo ay iska caabin kala kulmeen dadka deegaanka kooxihii weerarkaasi ku qaaday deegaanka.
Qaar kamid ah dadka deegaankaasi ayaa xili ay la hadlayeen Warsidaha Puntlandvision.com waxay sheegeen inay kooxahan yihiin maleeshiyo kasoo jeeda Koonfurta gobolka Mudug gaar ahaana Galmudug sida ay sheegayaan dadka deegaanka xalay dhacdadu ka dhacday.
Maleeshiyadan hubaysan ee weeraray deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay tiradoodu gaaraysa ugu yaraan 3 Qof oo rag ah oo watay hubka fudud sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Deegaanka Buubi ee gobolka Mudug ayaa magaalada Gaalkacyo u jira 125KM halka deegaanka Bali-Busle uu jiro 35Km horayna sidan oo kale uga dhaceen weeraro lamid ah kan lagu qaaday deegaanka Buubi ee gobolka Barriga gobolka Mudug.